Boombiin Moqaadishootti dhohe gaazexeessaa beekamaa biyyattii dabalatee lubbuu namootaa galaafate - BBC News Afaan Oromoo
Boombiin Moqaadishootti dhohe gaazexeessaa beekamaa biyyattii dabalatee lubbuu namootaa galaafate
Awiil Dihaar Salaad gaazexeessaa beekamaa Somaaliyaa
Gaazexessaan beekamaa Somaaliyaa tokko namoota kudhanii ol boombii magaalaa guddoo biyyaattii Moqaadishoo keessatti qaqqabeen lubbuun isaanii darbe keessaa tokko ta'uun gabaafame.
Awiil Dihaar Salaad, qodaalota eegumsa waliin jiran lamaafi konkolaachisaan gaazexeessichaa boombii bakka sakatta'insaa masaraa mootummaatti dhiyoo jirutti nama balleessee baduun dhohe isa jalqabaatiin lubbuun isaanii darbeera.
Itti-aanaan bulchaan naannoo ammoo kanneen madaa'an keessaa tokko turan.
Dipiloomaatooti Ameerikaa waggaa 28 booda Somaaliyaatti deebi'an
Dhohinsa lamaffaa qaqqabeenis lubbuun namootaa akka darbe gabaafameera. Gareen loltoota al-Shabaab haleellaa kana nuti raawwate jedhaniiru.
Akka Reuters gabaasetti dhohinsa kanaan namoonni 17 madaa'aniiru.
Obbo Salaad nama ganna 45 yommuu ta'u gaazexeessaa beekamaa bara 2005 dura osoo biyyattiin gadi dhiisee hin ba'iin dura miidiyaan biyyattii akka dandamachuu taasisuuf ikan hojjechaa ture yommuu ta'u waggoota dheeraan booda erga gara biyyaatti deebiyaniis Universal TV waliin hojjechaa jiru.
Haalli jiru bulee foyyaa'aa abdii jedhuun waggoota dheeraadhaaf Moqaadishoo keessa turuudhaan hojjechaa tureera, akka BBC Somaalee gabaasetti.
Gareen al-Shabaab kan warra al-Qaeda waliin walitti hidhannaa qaba jedhamu bara 2011 akka Moqaadishoo kessaa bahu ta'ullee magalaattii keessatti haleellaa walitti fufinsaan qaqqabsiisaa jira.
Haata'u malee, erga Pirezedaanti Tiraamp gara aangootti dhufanii US haleellaa humna xiyyaaraan garee kana irratti qaqqabsiiftu cimsitee itti fuftee jirti. Ji'uma kana gara jalqabaa Raayyaan US loltoota garee kanaa 62 haleellaa xiyyaaraa ja'a gaggeesseen ajjeesuu isaa dubbateera.
US State Department akka jedhutti gareen kun biyyattii keessatti lafa bal'aa qabatanii waan jiraniif warra boombii ofitti dhoosuun ofiifi namoota galaafataniin, meeshaaleen dhodhohaniin, moortaariifi meeshaalee waraanaa xixiqqaa fayyadamuun halleellaa gurguddaa qaqqabsiisuu danda'u jedha.
Somaaliyaa: Loltoonni Itophiyaa hoggana duraanii Al-shabaab Muktaar Rooboow to'atan